Parking garages For Sale and For Rent in Penzance, Cornwall
Uhlu Lwezakhiwo: Amagaraji nezindawo zokupaka izimoto Ukupaka amagalaji Cornwall Penzance
I-1 - 3 yohlu lwe-3
Ukupaka / Igaraji Lithengiswa ePenzance, eCornwall
Ukukholelwa ukuthi yakhiwe ngasekupheleni kwawo-1950 yileli garaji elihlaselwe kabili. Itholakala edolobhaneni laseNancledra elisemgwaqweni u-B3311 Penzance kuya kuSt Ives Road, ngemuva kwehholo ledolobhana. Igalaji liyisikhumba esisodwa esinezicabha ezimbili zokhuni ezibekwe ngaphansi kophahla olubunjiwe. Ihlukaniswe njengamanje ...
Penzance in Cornwall, Tr20 8nb
Published by Prh Estate Agents
buka Ukupaka amagalaji eshicilelwe Inyanga 1 edlule
Currently listed as a "Platinum A" home on this well renowned site the home itself offers an opportunity for buyers to gain a holiday home or an investment property in the beautiful county of Cornwall. Benefitting from a stunning lounge and kitchen diner with a triple aspect, two good size bedrooms ...
Penzance in Cornwall, Tr20 9sp
Published by Miller Countrywide - Helston
buka Ukupaka amagalaji eshicilelwe Izinyanga 5 edlule
Igalaji lokubamba lamahhala liyathengiswa. Indlela yeManor, Penzance. Ngokungangabazeki intshisekelo ekhethekile yalabo abahlala endaweni eseduze, kungenjalo ilungele labo abafuna ukupaka okuphephile noma isikhala sesitoreji ngokufinyelela okulula ku-A30. Amamitha we-2.46 x 4.93.
Penzance in Cornwall, Tr18 3hl
Published by Stacey Mann Estates
buka Ukupaka amagalaji eshicilelwe Izinyanga 6 edlule
Indawo yokuhlala egalaji (/ ˈꞬærɪdʒ / noma / ɡæˈrɑːʒ /) uyisakhiwo esibiyelwe ngodonga, sokubopha imoto noma izimoto ezingase zibe yingxenye yayo noma sinamathiselwe ekhaya ("igalaji elinamathiselwe"), noma okwakhiwe okuhlukile noma okuchithiwe ("igaraji elihlanganisiwe") . Amagalaji okuhlala ngokujwayelekile anendawo yemoto eyodwa noma ezimbili, yize kusetshenziswa amagalaji ezimoto ezintathu. Lapho igalaji linamathele endlini, igalaji linomnyango wokungena endlini. Imigwaqo ejwayelekile inomnyango obanzi ongaphakanyiswa ukuze kuvunyelwe ukungena nokuphuma kwemoto, bese kuvalwa ukuvikela imoto. Igalaji livikela imoto ekungeneni kwemvula, futhi, uma ifakwe umnyango wokukhiya wegaraji, ivikela nemoto (s) ekuntshontsheni nasekonakaleni. Amagalaji asetshenziselwa futhi amaphrojekthi ahlukahlukene kufaka phakathi ukupenda, ukwenza izinkuni nokuhlanganisa amaphrojekthi.
IPenzance (ipeni-ZANSS; iCornish: iPennsans) yidolobhana, isifunda somphakathi kanye nechweba eCornwall, e-England, e-United Kingdom. Yidolobha elikhulu kakhulu lasentshonalanga eCornwall futhi cishe ngamakhilomitha angama-64 (103 km) entshonalanga-nentshonalanga nentshonalanga yePlymouth ne-255 miles (410 km) entshonalanga-ntshonalanga yeLondon. Itholakala endaweni ephephezelwa yiMount's Bay, leli dolobha libheke eningizimu-mpumalanga ku-English Channel, lingasentshonalanga ethekwini lokudoba laseNewlyn, enyakatho yisifunda saseMadron nasempumalanga yisifunda saseLudgvan . Iphherishi lomphakathi lihlanganisa idolobha laseNewlyn kanye nemizana yaseMousehole, uPaul, uGulval, kanye naseHeamoor. Kunikezwe amashadi ahlukahlukene wasebukhosini ukusuka ku-1512 kuya phambili futhi kufakwe kwi-9 Meyi 1614, inesibalo sabantu be-21,200 (2011 census).